ကျပ်ငါးထောင်တန်ဖုန်း ရောင်းချမည့် အစီအစဉ် မဖြစ်နိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျပ်ငါးထောင်တန်ဖုန်း ရောင်းချမည့် အစီအစဉ် မဖြစ်နိုင်
ကျပ်ငါးထောင်တန်ဖုန်း ရောင်းချမည့် အစီအစဉ် မဖြစ်နိုင်
Posted by the best on Jan 29, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြထားပြီး ကျပ်ငါးထောင်ဖြင့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကဒ်များကို ရောင်းချပေးမည် ဆိုသည့် အစီအစဉ်သည် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံးမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြည်တွင်းမီဒီယာများသို့ တရားဝင် ပြောကြားလိုက်သည်။ ယနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်) နံနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ ဌာနအသီးသီးမှ အဓိက တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီတို့၏ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တက်ရောက်လာသည့် မီဒီယာများသို့ ပြောကြားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက “ဆက်သွယ်ရေး အနေနဲ့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးကိုမဆို လက်ခံပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို ခွင့်မပြုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေ ရှိနေတာကြောင့် လောလောဆယ် အနေထားမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် မရနိုင်သေးတာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲမှာ ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦးက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဘက်မှ တက်ရောက်လာသည့် တာဝန်ရှိသူများကို ၎င်း၏ ငါးထောင်တန်ဖုန်း စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး power point တင်ပြချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
သို့သော် ၎င်း၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက် အပြီးတွင် ဆက်သွယ်ရေးဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ မေးမြန်းလာသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများကိုမူ ထိုကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူက ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကုမ္ပဏီက နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ၎င်းစီမံကိန်းကို တင်ပြထားပြီးနောက် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသို့လည်း အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းထားသည်။
သို့သော် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးသို့ တင်ပြထားသည့် အဆိုပြုလွှာတွင်မူ ကျပ် ၅,၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဟူသည့် အဆိုပြုလွှာ မပါရှိဘဲ ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Second Mobile Operator အဖြစ် ငါးနှစ်သက်တမ်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးရန်ကိုသာ တောင်းဆိုထားသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖြစ်သည့် တာဝန်ရှိသူက “လက်ရှိ ရွှေပြည်တံခွန်ရဲ့ စီမံကိန်းကာလဟာ အရမ်းကို အချိန်နည်းပါး လွန်းပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခု အတွက် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ အလိုက်ကို တာဝန်ယူရ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အချိန်ဟာ မနည်းလှပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ လက်တွေ့မှာ လေးငါးခြောက်လတည်းနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း သန်းဂဏန်း အရေအတွက်ကို ထုတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာဟာ စဉ်းစားစရာပါ” ဟု သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ခွင့်ပြုချက် ကျလာသည်နှင့် အချိန်သုံးလမှ ခြောက်လအတွင်း မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကဒ် တစ်သန်းကို ထုတ်လုပ်မည်ဟု ဆိုသည့် အထက်ပါ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်မည့် မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်မှာ ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနက်ဝါ့ခ် အချင်းချင်းသာ ပြောဆိုနိုင်သည့် (ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချထားသည့် မည်သည့်ဖုန်းကိုမျှ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်စနစ်) တစ်ခုဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တူညီပါကြောင်းကိုလည်း အထက်ပါလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် မတူညီသည့် အချက်များ ရှိနေသေးသဖြင့် ထိုမတူညီသည့် အချက်အလက်များကို ညှိနှိုင်းကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက် ပြောကြားကြသည်။
ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ရုံး အဆင့်သို့ တင်ပြထားပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါဥပဒေ ထွက်ပေါ်လာပါက ပြည်တွင်း၏ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းရပ်များတွင် Second Operator ဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီလေးခုခန့်ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်များ ပေးသွားရန်ရှိကြောင်း အထက်ပါ ရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြထားသည့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာများမှာ ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ ရာဂဏန်းနှင့် ချီပြီးရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ထိုအရေအတွက်များတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အဆိုပြုလွှာများမှာ ပြည်တွင်းထက် ပိုမိုများပြားကြောင်း အထက်ပါ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုခများမှာ အခြားနိုင်ငံများထက် ဈေးကြီးနေရခြင်းမှာ အခြေခံအဆောက်အဦများကို ရင်းနှီးတည်ဆောက်ရမှု၊ နိုင်ငံတော်မှ ချပေးသည့် ဘတ်ဂျက်ကို ရေရှည်အသုံးပြုခွင့် မရပဲ သတ်မှတ်နှစ်များ အတွင်း အမြတ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်နေရခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ သို့သော် အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၏ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုခများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ဆင့်ဆင့်ချင်း လျော့ကျ သက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
ဘဘ တွေးမိတာ တခုလေး ပြောမယ် ၊ အလကားကောင်တွေ ၊ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း တပ်ဆင်ခွင့်ပေး
လိုက်ရင် သူတို့မြိုစရာ ဘာမှ မရှိတော့လို့ကွဲ့၊ ရေသောက် ဗိုက်မှောက်နေရမယ်စိုးလို့၊
သူတို့ငတ်ပေါက်တိုး မယ်စိုးလို့၊ ဒါပဲလေ လကွယ် ။
ကျပ်ငါးထောင်ဖြင့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကဒ်များကို ရောင်းချပေးမည် ဆိုသည့် အစီအစဉ်ကို ဆက်သွယ်ရေးဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ မေးမြန်းလာသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများကို မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦး ၏ ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ က တာဝန်ရှိသူ တွေ က ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိ ဆိုပါလား ။
လက်တွေ့ ရှင်းလင်း မ တင်ပြ နိုင် ပဲ… ကျပ်ငါးထောင် ဈေးကြိုသတ်မှတ် ရဲတယ်။
ပြည်သူတွေကို မ တရား လိမ်စား လုပ်စားနေ ကြတာပါလို့ ထင် မိတယ် ။
ကျွန်တော်တင်တဲ့အတိုင်းပဲ အားလုံးလည်း ထင်ကြ ပါသလား ။
၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်ရောင်းချမည့် သတင်း နေချင်းညချင်း ပြီး လိုက်ပြီ လား။
ပြည်သူတွေ ရေရှည် အကျိုးရှိမဲ့ စီးပွားရေးစီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
အလကား ကောလဟာလတွေ။ အလကားနေရင်း ပြည်သူတွေ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်အောင် ဆွပေးနေတာလား ။
အဖြစ်မှန်တွေကို ပြည်သူကို သိစေချင်ရင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ရှင်းလိုက်ပါ ။
မှန်တာကိုလုပ်ဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ မှန်တာကိုပြောဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ မလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ မေးမြန်းလာသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေများကို မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦး ၏ ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ က တာဝန်ရှိသူ တွေ က ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိ ဆိုရာမှာ
အဲဒီနည်းပညာကို လုံးလုံးနားမလည်လို့ (သို့) ၅၀၀၀ နဲ့ ဆင်းကဒ်ထုတ်ရောင်းပီး ဖုန်းပြောနိုင်မယ်လို့ နလဗိန်းတုံးအတွေးနဲ့ လူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးတာလား
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်နည်းပညာကို အသေးစိတ်ထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုလိုတာလားဗျာ
စပြီးသတင်းကြားထဲက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပြီးသားပါ
“““ခွင့်ပြုချက် ကျလာသည်နှင့် အချိန်သုံးလမှ ခြောက်လအတွင်း မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကဒ် တစ်သန်းကို ထုတ်လုပ်မည်ဟု ဆိုသည့် အထက်ပါ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်မည့် မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်မှာ ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနက်ဝါ့ခ် အချင်းချင်းသာ ပြောဆိုနိုင်သည့် (ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချထားသည့် မည်သည့်ဖုန်းကိုမျှ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်စနစ်) တစ်ခုဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။”””
1မိနစ်25ကျပ်နှံုးနဲ့ 5000တန်ဖုံးအချင်းချင်းဘဲသုံးလို့ ရလဲ တန်တာဘဲ။
“““ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းရပ်များတွင် Second Operator ဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီလေးခုခန့်ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်များ ပေးသွားရန်ရှိကြောင်း အထက်ပါ ရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြထားသည့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာများမှာ ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ ရာဂဏန်းနှင့် ချီပြီးရှိနေသည်ဟု
ဆောင်ရွက်ခွင့်များ ပေးသွားရန်ရှိသောကုမ္ပဏီလေးခုခန့် ကဖုံးကဒ်ကိုဘယ်ဈေးရောင်းမှာလဲ၊
“““ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြထားသည့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာများမှာ ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ ရာဂဏန်းနှင့် ချီပြီးရှိနေသည်ဟု
ခွင့်ရသွားပြီ။ ဆက်သွယ်ရေးက ပြည်သူအတွက်ဘယ်လိုရွေးချယ်ပေးမလဲ။ ပြည်သူတွေစောင့်
“““ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုခများမှာ အခြားနိုင်ငံများထက် ဈေးကြီးနေရခြင်းမှာ အခြေခံအဆောက်အဦများကို ရင်းနှီးတည်ဆောက်ရမှု၊ နိုင်ငံတော်မှ ချပေးသည့် ဘတ်ဂျက်ကို ရေရှည်အသုံးပြုခွင့် မရပဲ သတ်မှတ်နှစ်များ အတွင်း အမြတ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်နေရခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ”””
( ဈေးကြီးနေရခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်မှ ချပေးသည့် ဘတ်ဂျက်ကို ရေရှည်အသုံးပြုခွင့် မရပဲ သတ်မှတ်နှစ်များ အတွင်း အမြတ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်နေရခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း)
အဖြေကတော့ရှိနေပြီ။ဖြေရှင်းနိုင်ရင် 5000တန်ဖုံးမဝေးတော့ပါဘူး။မျှော်လို့ ရသေးတယ်။
it is one side explanation. Please wait U Lwin Naing Oo’s explanation.
We were be ever lied by Telecommunication foralong time.
K 5000 mobile “impossible for the time being”
NAY PYI TAW, 29 Jan-News that Myanma Posts and Telecommunications will sell mobile phone lines at the price of K 0.25 million or 0.3 million was overshadowed by that of K 5000 SIM Card. It gained public attention as local call will be charged K 25 per minute and trunk call, K 30 per minute. Though, MPT labeled news of K 5000 SIM Cardahoax.
All the people, including trishaw drivers, vendors, low-income government staff and especially those who did not afford mobile phones carryingaprice tag of K 1.5 million or K 0.5 million, are over the moon to insert K 5000 SIM card.
Officials of Shwe Pyi Tagon Company which proposes the low-cost SIM Card, Directorate of Telecommunications, Myanma Posts and Telecommunications met the press to clarify the matter at MPT training school in Pazundaung in Yangon today.
U Lwin Naing Oo, managing director of the company, explained enthusiastically about plans to sell K 5000 SIM Cards and to help all walks of life use mobile phones. “I found mobile phones in Singapore and Malaysia are cheap when I visited there. I did this business to help the people of our country hold mobile phones at cheapest price. It is an attempt to sell at lowest price and help everyone use mobile phones. Our company will start from Ayeyawady and Yangon Region and will expand to the whole country within five years,” he said.
The meeting was lively with technical questions fielded by MPT’s technicians.
U Lwin Naing Oo guaranteed to sell SIM Cards soon. The plans will be explained at Konbaung Hall of Traders Hotel on 30 January, he invited all those present.
U Eaidi Hla, MPT managing director, said to improve communications status in every corner of the country is objective of MPT and invited to work in cooperation on common ground.
Myanma Post and Telecommunications is reducing initial installation fees step by step for enabling the people to contact each other by phone at low cost as it is responsible for provide efficient communication services to the State and people. It reduced the price ofamobile phone from K 1.5 million to K 0.5 million and worked in cooperation with private companies to help the people buy and use mobile phones at any place or time. The installation charge of auto telephones was reduced and could be paid in installments as of May 2011 though it was once K 1 million. MPT is working in cooperating with 23 private companies in accordance with existing laws for GSM/UMTS phone line extension project to make mobiles available at low price in both rural and urban areas for socioeconomic development of the people. It has planned to reduce mobile phone installation fee as it is in neighbouring countries during the project period of five years.
MPT has to build radio stations on chosen sites for enabling to useamobile phone, install sufficient machines, and construct communication routes for local, long-distance and trunk calls foralong time. MPT issuedapublic announcement that “telephone at the price of K 5000 is impossible for the time being as it takesaconsiderable time to establishacommunication network”.-MNA
………..New Light of Myanmar………..
၁၅သိန်း မှ ၅သိန်း
၅သိန်း မှ ၃သိန်း ၊ ၂သိန်းခွဲ
၂သိန်းခွဲ မှ ငါးထောင်
မင်းတို့မချနိုင်ဘူး လား ခွေးသူတောင်းစားတွေ။
ပြည်သူတွေကို အ တယ်လို့များထင်နေလား။ အရင်က ခွေးစစ်တပ်ကိုကြောက်လို့နေရင်နေမယ်။
ဆရာဂျီးပဲ သုံးခုမှာ ၂ ခုက အစင်းဂျီးနဲ့ဆိုတော့လေ
“လက်ရှိ ရွှေပြည်တံခွန်ရဲ့ စီမံကိန်းကာလဟာ အရမ်းကို အချိန်နည်းပါး လွန်းပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခု အတွက် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ အလိုက်ကို တာဝန်ယူရ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အချိန်ဟာ မနည်းလှပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ လက်တွေ့မှာ လေးငါးခြောက်လတည်းနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း သန်းဂဏန်း အရေအတွက်ကို ထုတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာဟာ စဉ်းစားစရာပါ”
ဟုတ်ကဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင် စာချုပ် ချုပ် အချိ်န်မှီ မပြီးရင်လျော်ခိုင်းဗျာ။
“အထက်ပါ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်မည့် မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်မှာ ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနက်ဝါ့ခ် အချင်းချင်းသာ ပြောဆိုနိုင်သည့် (ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချထားသည့် မည်သည့်ဖုန်းကိုမျှ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်စနစ်) တစ်ခုဖြစ်နေခြင်း”
ုဟုတ်ကဲ့ ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ။ အချင်းချင်းပြောလို့ရရင်ပဲ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ငါးသိန်းတန်ကိုင်နိုင်တဲ့
လူတွေအတွက်က ငါးထောင်တန် နောက်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ အခက်အခဲ မရှိနိုင်ပါဘူးဗျာ။
ကျပ်ငါးထောင်ဖြင့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကဒ်များကို ရောင်းချပေးမည် ဆိုသည့် အစီအစဉ် အခြေအနေများကို မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦး ၏ ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ က ဂုဏ်သိက္ခာရှိ ရှိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ရှင်းလိုက်ပါ ပြီ ။
ဆက်သွယ်ေ၇းက ပြည်သူ့ဆန္ဒ္ဒ္ဒကို သ်ိရင်…. ပြည်သူကို ချစ် ရင်… မြန်မာနိုင်ငံ ကို ချစ် ရင်…အဆင်ပြေ ပြီ ။
ဘယ်လိုလဲ ဆက်သွယ်ေ၇း ?
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ရှင်းလိုက်ပါ ။ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ မလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။